Waa Kan Hogaamiyaha Kaliya Ee Soomaaliya Badbaadin Kara | Xaqiiqonews
Waa Kan Hogaamiyaha Kaliya Ee Soomaaliya Badbaadin Kara
Ma ahi guulwadayaasha dareenkooda dhaafsaday shilimaad yar, kuwaasi oo sheegta wariyaal islamarkaan dadka u shida heeso ay laxamadooda leeyihiin “hogaamiyaal xisbi qabyaaladeysan”.
Marka hore waxaan rabaa in aan kuu sheego ma ahi siyaasi, ma ahi guulwadayaasha dareenkooda dhaafsaday shilimaad yar, kuwaasi oo sheegta wariyaal islamarkaan dadka u shida heeso ay laxamadooda leeyihiin “hogaamiyaal xisbi qabyaaladeysan”.
Qofkaa rabtid la jeclow codkaada, laakiin waxa jirta xaqiiq lama dhaafaan ah, taasi oo ah been ayaa laguu sheegay, waa lagu sasabay, waxaad ku dhagantahay eber, hadii aad aaminsantahay in hogaamiyaha qalbikaada ku jira marka la doorto, dalka uu xasilaayo, barwaaqo la helaayo ummadana ay is raaceyso.
Waliga ma maqashay heestan “Ninka ugu il dheer baa dadka ugu ayaan daran“, Waxa aan rabaa oo kaliya in aan xisaabtaada ku daro halkan su’aal, hal su’aal bes “Ilaa intee baan sii raadin doonaa hogaamiyaal na badbaadiya?
Ilaa intee baan ku sii dhaganaan doonaa yididiilada beenta ee ah hogaamiyaha kan xigga ayaa fiicnaan doona oo xalin doona dhamman dhibaatooyinka na heysta.
Ilaa intee bey nagu qaadan doontaa in aan ogaano runta jirta ee ah “siyaasiyiinta waxa ay leeyihiin indho Kursiga lagu arko, ee malahan indho dalka lagu arko”.
Hogaamiyaha dalka, badbaadiyaha dalka ma ahan kan, kan soo socda, kan sii xigga, badbaadiyaha waa hal waa “annaga” waan ku celinayaa badbaadiyaha dalka waa Adiga, iyaga iyo Aniga.
Waxa aan rajeynaa afartii sano ee ugu dambeysay in ay nooga ekaato fikradda “ku dhaama kii hore”, waxaana dhalinyarada ka rajeynayaa in aysan ku milmin ciyaarta “Qori isku dhiibka” ee ka dhaxeysa siyaasiyiinta u jeedkooda yahay oo kaliya “Kursi”.
Badbaadiyaha dalka uma baahna in uu soo xirto shaar iyo suud dadkana uu dhagaha kaga adimo, si uu ugu qanciyo in uu yahay “musharax”, kaliya waxaa kugu filan in aad ka soo baxdo oo dadka si fiican ugu adeegto jagada aad heyso, hooyo-aabo, Macalin, wariye, dhaqtar, farmashiiste, arday, kalkaaliso, shaqada aad rabto qabo xitaa nadaafad, balse shaqadaada ha noqoto mid dadka jeclaadaan, mid dadka wax siisa yeysan noqon mid dadka wax yeesha.
Ugu dambeyn waan ogahay qoraalkeygani in uusan gaareyn dadka oo dhan, laakin adiga hadiiba uu ku soo gaaray aadna kaa faa;iday intaas ayaa igu filan.